ISBEDELKA NOLOSHA – Goobjoog News
Sheekada Gorgorka: Waxa la sheegaa in Gorgorku ka mid yahay noolayaasha duula kuwa ugu cimriga dheer. Wuxu cimrigiisu gaadhaa 70 sano. Laakiin si uu da’daa u gaadho waa in uu maro marxalad aad u adag. Waxa la sheegaa marka uu afartan jirsado, waxa daciifa ciddiyihii dhaadheeraa ee uu ugaadha ku dafi jiray. Gaajo iyo macluul ayuu wakhtiga badankiisa ku dhammeystaa. Afkii dheeraa wuu soo qaloocsamaa. Baalashii oo gabow dartii cuslaaday waxa ay ku dhagaan laabtiisa, duulistii baa ku adkaata.
Gorgorku wuxu u duulaa buurta xageeda u sareysaa halkaas oo uu cushka hoyga u ah ka sameysto. Wuxu bilaabaa in uu afka dhagaxyada buurta la dhaco inta uu ka af-dhacsanayo. Waxa anu muddo sugaa in afkii dheeraa dib ugu soo baxo. Marka afku u soo baxo ayuu bilaabaa in uu ciddiyihii iyana iska siibo. Wuxu sugaa inta ay ciddiyuhu u soo baxayaan markaasu bilaabaa in uu baalasha gaboobay iska rifo si ay kuwa cusubi ugu soo baxaan. Maalinta 150 cisho u dhammaato, ayuu duulimaadkii iyo ugaadhsigii dib u bilaabaa siina noolaada 30 sano oo dambe.
Sheekadan waxa aan u soo qaatay in aan is xasuusino sida qof kasta oo inaga mid ahi looga baahan yahay in uu la yimaaddo isbedel dhab ah. Illaahay Subxaana wa Tacaalaa, wuxu Qur’aanka kariimka ah inoogu sheegay: (13:11) ﴾-: ﴿إِنَّاللَّهَلايُغَيِّرُمَابِقَوْمٍحَتَّىيُغَيِّرُوامَابِأَنفُسِهِمْIllaahay dadka ma bedello haddii aanay iyagu isbedel isku sameyn. Haddii qofku isbedel la yimaaddo oo uu xumihii ku bedelo daacad iyo wanaaga, Illaahayna wuxu siiyaa degenaasho, farxad, iyo nolol wanaagsan lagana qaadaa warwarkii, cadhdii iyo noloshii kadeednayd.
Xasuuso in Illaahay arrimahaaga oo dhan kuu yasiray kuuna fududeeyey maridda dariiqaa guusha aad ku gaadhay.Ha is odhan sidii Qaaruun(27:78)﴾قولهتعالى: ﴿قَالَإِنَّمَاأُوتِيتُهُعَلَىٰعِلْمٍعِندِي, cilmigayga ama maskaxdayda wanaagsan ayaan xoolahan ama guushan ku keenay. Waa in aad tawaaduc la timaadid oo mar kasta nimcadaa Allah ugu mahad celisid.
Isbedel kasta oo aad sameysid iyo wax kasta oo wanaagsan oo aad la timaadid, waxa aad ogaataa in uu qof kaaga horreyey dad badan oo kalena kaaga dambayn doonaan. Ha is odhan adiga ayaa cilmigan ama camalkan wanaagsan keli ku ah. وَفَوْقَكُلِّذِيعِلْمٍعَلِيمٌ﴾ 76:12}
Waxaa Qoray:- Xildhibaaan Maxamed Cumar Carte, Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenkii Xukuumadii hore.